စပစ်ဖိုင်းယား လေယာဉ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ Supermarine Spitfire
၂ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြုပ်နှံထားသော လေယာဉ်များ
Spitfire တိုက်လေယာဉ်များသည် ၁၉၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၌ ဂျာမန်တိုက်လေယာဉ်များကို ယှဉ်ရာမှာ အနိုင်ရ အောင်မြင်ခဲ့သော တိုက်လေယာဉ်အဖြစ် ကျော်ကြားပြီး ဂျာမဏီကို အံတုနိုင်သည့်အတွက် ဗြိတိသျှတို့၏အမျိုးသားရေး လက္ခဏာတခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အခုတွင် ပျံသန်းနိုင်လောက်အောင် အခြေအနေ ရှိနေသော Spitfire တိုက်လေယာဉ် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ၃၅ စင်းခန့်မျှသာ ကျန်ရှိတော့သည်ဟု ယူဆရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြုပ်နှံထားသော လေယာဉ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗြိတိသျှစစ်တပ်များ ဆုတ်ခွာစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၌ မြှုပ်ဝှက်ထားခဲ့သော ဗြိတိသျှ Spitfire တိုက်လေယာဉ် အစင်း၂၀ ကို မြန်မာအစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ပြန်လည် တူးဖော်ဖို့ သဘောတူခဲ့သည်။
၁၉၄၅ ခုနှစ်၌ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂျပန်ဝင်လာချိန်တွင် ဆုတ်ခွာခဲ့ရသော ဗြိတိသျှစစ်တပ်က ဂျပန်များလက်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီး အသုံးချခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖျက်ဆီးခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့မည်ကို စိုးရိမ်၍ Spitfire တိုက်လေယာဉ် အစင်း ၂၀ ကို မြှုပ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုလေယာဉ်များသည် တပ်ဆင်ခြင်း မရှိသေးသော လေယာဉ်များဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများကို သေတ္တာကြီးများနှင့် ထည့်ပြီး မြုပ်ထားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ စစ်ပြီး၍ ဂျပန်များ လက်နက်ချပြီးနောက်မှာ လေယာဉ်များ ဝှက်ထားခဲ့သည်ကို မေ့နေခဲ့ကြသကဲ့သို့ တစ်ဖက်တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာစုနှစ်တဝက်မျှ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှု အောက်ကို ရောက်နေခဲ့ခြင်းကြောင့် တူးဖော်ခွင့်မရခဲ့ပါ။
↑ ျမန္မာျပည္မွာဝွက္ထားခဲ့တဲ့ ျဗိတိသွ်တိုက္ေလယာဥ္ေတြ ျပန္ေဖၚမယ္ – Spitfires buried in Burma | MoeMaKa Burmese News & Media။ 17 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Supermarine Spitfire – History ofalegend (RAF Museum) Archived 21 July 2015 at the Wayback Machine.
The Supermarine Spitfire in Indian Air Force Service Archived6December 2007 at the Wayback Machine.
Spitfire Pilots, articles about Spitfires and its pilots Archived 15 July 2008 at the Wayback Machine.
RAF Museum Spitfire Mk VB walk-around photos Archived 23 July 2011 at the Wayback Machine.
Examples of Photographic Reconnaissance Spitfires Archived 23 February 2010 at the Wayback Machine.
Sound recordings of Supermarine Spitfire Aircraft Archived 13 March 2014 at the Wayback Machine.
A photograph of the 1939 "Speed Spitfire" in Flight Archived5March 2016 at the Wayback Machine..
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စပစ်ဖိုင်းယား_လေယာဉ်&oldid=726277" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။